Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့် (72-63-9) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့်
rating: SKU: 72-63-9. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Methandrostenolone ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Dianabol) အမှုန့် (72-63-9) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့် အစဉ်အဆက်ဈေးကွက်နှင့်မည်သည့်ပုံစံအတွက်ရေပန်းအစားဆုံး steroids တဦးထိမှန်ဖို့ရေပန်းအစားဆုံးပါးစပ် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နီးပါးအမြဲတစ်ဦးပါးစပ်တက်ဘလက်အဖြစ်ကိုတွေ့နေစဉ်, Dianabol တစ်ခုထိုးဆေးဖြေရှင်းချက်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်တက်ဘလက်များအုပ်ချုပ်ရေး၏အဓိကလမ်းကြောင်းကိုယ်စားပြုသည်။
Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့် အခြေခံ ဇာတ်ကောင်
ထုတ်ကုန်အမည်: Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့်
CAS နံပါတ် - 72-63-9
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 163-164 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Methandrostenolone/Dianabol Powder ဆိုတာ ဘာလဲ
Dianabol သည် Metandienone သို့မဟုတ် methandrostenolone ဟုလည်းလူသိများသော Metandienone ၏အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြစ်သည်။ Dianabol အမှုန့် CAS 72-63-9၊ အဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်လူကြိုက်များသော steroid Dianabol တက်ဘလက်၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Dbol ဟုလည်းသိကြသော Dianabol သည် ပထမဆုံး စတီးရွိုက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အန်ဒရိုဂျင်မဟုတ်သော်လည်း၊ Testosterone နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံချင်းဆင်တူသော ဓာတုဆေးဖြစ်သည်။ Dianabol ကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် သို့မဟုတ် အခြားဖြည့်စွက်စာများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ရနိုင်သည်။ စျေးကွက်တွင်ရောင်းချရန် Dianabol အမှတ်တံဆိပ် ရာနှင့်ချီရှိသော်လည်း အများစုမှာ အတုများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော ဖြည့်စွက်အားဆေးကို မဝယ်ယူလိုပါက ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အရင်းအမြစ်မှသာ ဝယ်ယူသင့်ပါသည်။
Methandrostenolone သည် အားကစားသမားများနှင့် ကာယဗလသမားများအတွက် အသုံးအများဆုံး စတီးရွိုက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး ချက်ချင်းရလဒ်များကိုပေးကာ အားကစားခန်းမတွင် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကြွက်သားအရွယ်အစားကို တိုးစေရုံသာမက ခွန်အားကိုလည်း တိုးစေပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အားကစားခန်းမ၌ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကြွက်သားများအတွင်း နိုက်ထရိုဂျင်ထိန်းသိမ်းမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်ထက် ပရိုတင်းဓာတ်ကို ပိုမိုထိန်းထားနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ကြွက်သားဆဲလ်အသစ်များ ဖန်တီးသည့်ပမာဏ တိုးလာခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့အား ပိုမိုကြီးမား၍ သန်မာစေသည်။
Dianabol Methandrostenolone သည် ပျက်စီးနေသော ကြွက်သားတစ်သျှူးများကို ပုံမှန်ထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ၎င်းသည် Testosterone ထုတ်လုပ်မှုကိုမထိခိုက်စေသော်လည်း၊ Dianabol သည် သင့်ကိုယ်ပိုင် gonads မှသဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်သည့်အရာများနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် gonads မှထုတ်လုပ်သောများနှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ယူထားသောသူတို့အပါအဝင်အခြား steroids ကိုအခမဲ့ T အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် Dianabol သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအခမဲ့ testosterone ပမာဏကိုတိုးစေသည်။ steroid သံသရာ. ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင်အသုံးပြုသည့်အရာများသည် အမှန်တကယ်အသက်ဝင်နေသောကြောင့် သင်သည် လျှော့သုံးနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ရရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Anabolic Steroid Powder ဆိုတာ ဘာလဲ
Anabolic steroids များသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အချို့သော ဇီဝဖြစ်စဉ်များကို မြင့်မားသောအဆင့်တွင် လှုံ့ဆော်ရန် ကြိုးစားနိုင်သည့် သဘာဝမဟုတ်သော ဟော်မုန်းများအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။
အစိမ်းလိုက် anabolic steroids များတွင် အမိုင်နိုအက်ဆစ် methionine ၏ globular derivatives များပါ၀င်ပြီး အခြေခံ အတန်းသုံးမျိုးဖြစ်သည့် testosterone၊ methionine နှင့် estradiol ဟူ၍ ထပ်မံခွဲခြားနိုင်သည်။
Testosterone နှင့် methionine တို့သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အဓိက နှင့် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဟော်မုန်းများဖြစ်ပြီး estradiol သည် တက်စတိုစတီရုန်းနှင့် အခြားသော အာရုံစူးစိုက်မှုများတွင် အမျိုးမျိုးသော ဟော်မုန်းများကို တုပနိုင်သည်။
Anabolic Steroids များသည် ကြွက်သားထုထည်ကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး ခွန်အားကိုလည်း တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် အားကစားသမားများက တွင်ကျယ်စွာ ဝယ်ယူအသုံးပြုကြသည်။
၎င်းတို့ကို ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာများကို ကုသရန်၊ သွေးဆုံးခြင်း၏ လက္ခဏာများကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ညင်သာပျော့ပျောင်းသော ဆီးကျိတ် hyperplasia ကဲ့သို့သော ရောဂါများကို ကုသရန်၊ ဒဏ်ရာ အနာကျက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ၎င်းတို့သည် ဒဏ်ရာမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သည်။
Methandrostenolone / Dianabol Powder ၏သမိုင်း
ဂျာမဏီမှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် Testosterone ကို စတင်ပေါင်းစပ်သောအခါ Steroid သည် 1935 ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို ကုသရန် အစပိုင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း၊ ပေါင်းစပ်ထားသော Testosterone သည် 1950 ခုနှစ်များအတွင်း အားကစားသမားများ၏ ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ဆေးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကုန်ကြမ်း Dianabol အမှုန့်သည် စီးပွားဖြစ်ရောင်းချသည့် ပထမဆုံး တရားဝင် anabolic steroids များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ၎င်းအား ၁၉၅၄ ခုနှစ် အိုလံပစ်ပွဲတော်အတွင်း ရုရှားအားကစားသမားများ စတင်ထိုးသွင်းခဲ့သော Testosterone အစားထိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဤတက်စတိုစတီရုန်း ထိုးဆေးများသည် အားကစားလေ့ကျင့်မှု ခံယူနေသည့် အမျိုးသားများကို ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးကာ ၎င်းတို့၏ ကြွက်သားတစ်သျှူးများကို တည်ဆောက်ရန်နှင့် ပိုလျှံနေသော အဆီများကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။
အားကစားလေ့ကျင့်စဉ်တွင် တရားဝင် စတီးရွိုက်များ လူကြိုက်များလာပြီး anabolic steroid Dianabol အမှုန့်သည် အလွန်ထိရောက်သော ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် အခြားသော စတီးရွိုက်ပုံစံများကို ထိုးသွင်းရန် လိုအပ်သော်လည်း Dianabol ကို ဆေးပြားပုံစံဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးပြားများသည် စတီးရွိုက်ကို အသုံးပြုရလွယ်ကူစေပြီး လျင်မြန်စွာ ဖြန့်ဝေနိုင်စေသည်။
ကာယဗလသမားများနှင့် အခြားအားကစားသမားများကြားတွင် အစပိုင်းတွင် ရေပန်းစားခဲ့ပြီး မကြာမီ ၎င်းတို့၏အသွင်အပြင်ကိုမြှင့်တင်ရန် အားကစားသမားမဟုတ်သူများကြားတွင် ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ ကြွက်သား dysmorphia နှင့် ရုန်းကန်နေရသော လူငယ်များသည် ကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်နှင့် အဆီကျရန်အတွက် Dianabol ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Dianabol ၏ ကျော်ကြားမှုသည် ၎င်း၏ အာနိသင်နှင့် သုံးစွဲနိုင်မှုတို့ကြောင့် 1985 ခုနှစ်အထိ ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ ထိုးရန်မလိုအပ်သောကြောင့် အားကစားသမားအများအပြားက ၎င်းအား အခြားသော စတီးရွိုက်ဆေးများထက် ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်မှုရှိသော အစားထိုးတစ်မျိုးအဖြစ် မြင်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ၎င်းသည် အမှန်တရားနှင့် မဝေးနိုင်ပါ။
Methandrostenolone / Dianabol Powder ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
Dianabol ၏ပန်းတိုင်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း တည်ငြိမ်သော anabolic အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာက ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားတစ်သျှူးတွေကို ပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ ဝက်ခြံ သို့မဟုတ် ထိပ်ပြောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း လျှော့ချပေးသည်။
Dianabol လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းမှာ Testosterone ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပုံရသည်။ Testosterone သည် ကြွက်သားများ သန်မာမှု၊ သန်မာမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။ တက်စတိုစတီရုန်းအဆင့်များ တိုးလာသောအခါ ကြွက်သားများ ပိုမိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီး စွမ်းအင်အဆင့်လည်း မြင့်မားလာနိုင်သည်။
Dbol သည် ကြွက်သားတစ်ရှူးများတွင် ပရိုတင်းဓာတ်ပေါင်းစပ်မှုကို တိုးမြင့်စေသော လှုံ့ဆော်ပေးသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ဒါက သင့်ကြွက်သားတွေကို ကြီးထွားစေပြီး မြန်မြန်ပြုပြင်ပေးပါတယ်။ Dianabol သည် anabolic ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရှိ နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏ နောက်ကွယ်မှ မောင်းနှင်အား ဖြစ်သည်။ သင်နေနိုင်လေလေ ဤအဆင့်များကို တိုးစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ပရိုတိန်းစားသုံးမှု၏ 100% ရာခိုင်နှုန်းသည် ကြွက်သားများရရှိရန်ဖြစ်သည်။
Methandrostenolone / Dianabol Powder ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
Methandrostenolone/Dianabol Powder ကို ပါးစပ် Dianabol ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည် ပရိုတင်းနှင့် ပတ်သက်ပါသည်။ ၎င်းကိုရယူခြင်း၊ ချွေတာခြင်းနှင့် ကျောက်မာမာကြောကြွက်သားများတည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုခြင်း။ Dianabol ရှိ တက်ကြွသောဒြပ်ပေါင်းများသည် သွေးမှ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကို ပိုမိုစုပ်ယူရန် ကြွက်သားများကို အချက်ပြပြီး ပရိုတင်းဓာတ်များ တိုးပွားလာခြင်းဖြင့် ကြွက်သားပရိုတင်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဖန်တီးရန် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသည်။ Dianabol တွင်ရှိသော ဒြပ်ပေါင်းများသည် ကြွက်သားများအတွင်း၌ရှိပြီးသား အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကို သိုလှောင်ထားရန် ကြွက်သားများကို လျော့ချပေးကာ ပရိုတင်းဓာတ်ကို လျော့ပါးစေသော ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို ဖန်တီးကာ ပုံမှန်ပရိုတင်းဓာတ်ပြိုကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ချိန်အတွင်း anabolic အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ Dianabol သည် ခက်ခက်ခဲခဲရရှိထားသော ကြွက်သားများကို နဂိုအတိုင်းထားရန် ကူညီပေးသည်။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း သင်သည် ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူဖြစ်ပါက ဤထုတ်ကုန်ကို သင်လုံးဝနှစ်သက်မည်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောရလဒ်များကိုမြင်လိုပါက Dianabol အမှုန့်ကိုယနေ့အွန်လိုင်း ၀ ယ်ပါ။
Methandrostenolone/Dianabol ၏ လူသိများသော အကျိုးကျေးဇူးများမှာ-
ကြွက်သားထိန်းသိမ်းမှုစနစ်နှင့် ပိန်ကြုံးသောကြွက်သားများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း
Amino Acid Catalytic Converter နှင့် Protein Synthesis ကို အားပေးသည်။
သဘာဝ Steroidal Anabolic ဆေး နှင့် Anti-Proteolytic ဖော်မြူလာ
Testosterone Level ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အားကစား စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
ပရိုတင်းဓာတ်ကို လျင်မြန်စွာ လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုအတွက် အစွမ်းထက်သော Anabolic ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် Prohormones များပါရှိသည်။
3-Hydroxy-1,4-androstadien-17-one ပါဝင်ပြီး သွေးနီဥဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်၊
ခွန်အားနှင့် အရည်အသွေး ကြွက်သားထုထည်ကို နှေးကွေးသော်လည်း တည်ငြိမ်စွာ ရရှိစေသည်။
အရေပြားအောက်ရှိ ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
Methandrostenolone/Dianabol အမှုန့်သောက်သုံးသော၊ သံသရာ
မင်းကို သားရဲနဲ့တူစေမယ့် Dbol ပမာဏကို မင်းရှာနေတယ်ဆိုရင် ဒီနေရာဟာ ရှာဖွေရမယ့်နေရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Dbol စက်ဝန်းကို တစ်ယောက်တည်း အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို လျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ပါက 30 ပတ်ပတ်လုံး အစာနှင့်အတူ Dianabol ပမာဏ 50-6mg ကြား သောက်သင့်သည်။ အသည်းပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အဆိပ်သက်ရောက်မှု (Anabol ကဲ့သို့) ပါသောကြောင့် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ဘောင်အတွင်း မှီဝဲရန် အရေးကြီးပါသည်။
Dbol တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းတွင် ကပ်လိုပါက သင်၏အချိန်ကို 4-5 ပတ်အထိကန့်သတ်ပါ။
Dianabol သည် အလွန်တိုတောင်းသော သက်တမ်းရှိသည်။ တစ်နေ့တာလုံး 30-50mg တိုးပြီး သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ သင်၏နေ့စဉ် Methandrostenolone ပမာဏကို အစားအစာများနှင့် လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ပျို့အန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗိုက်နာခြင်းများကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးသွေးပမာဏကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ကုန်ကြမ်း Dianabol အမှုန့်ကို 10g,50g,100g,500g… အစရှိသည်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Dianabol (Methandienone) သည် 5-6 နာရီ၏သက်တမ်းတိုတောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်သောက်ရန် အကြံပြုထားသည်။
Methandrostenolone/Dianabol Powder ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Methandrostenolone/Dianabol Powder ၏ အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ-
Gynecomastia – ဒါက သင့်ရင်ဘတ်တစ်ရှူးတွေမှာ ရေဓာတ်ထိန်းထားတာကြောင့် ဖြစ်တာကြောင့် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြာကြီး စက်ဘီးစီးခြင်းကို ရှောင်ရှားလိုပါလိမ့်မယ်။
တိုးများလာသော ရန်လိုမှု - ၎င်းသည် Dianabol ကိုသောက်သူတိုင်းအပေါ် မသက်ရောက်သော်လည်း အချို့သော အားကစားသမားများက ၎င်းကိုယူပြီးနောက် ပိုမိုပြင်းထန်သည်ဟု ခံစားရကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သင့်လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုငြိမ်သက်သောပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုချင်ပါက သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုမှတ်တမ်းရှိပါက ပြဿနာအချို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဝှေးစေ့ကျုံ့ခြင်း – steroids ထိုးတဲ့ အားကစားသမားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပေမယ့် Dianabol ကို ပါးစပ်နဲ့ သောက်တဲ့သူတိုင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤလက္ခဏာသည် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်တော့ဘဲ သင့်စက်ဝန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်တွင် သူ့အလိုလို ပြန်ပြန်သွားတတ်သည်၊ သို့သော် မိသားစုတစ်ခုကို စတင်လိုပါက စိတ်ဆင်းရဲစေနိုင်သည်။
Methandrostenolone / Dianabol Powder ကိုဝယ်ပါ။
Dianabol (Methandrostenolone) သည် 40mg standard 100 တက်ဘလက်အတွက် USD10 ခန့် ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် သင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပါးစပ်တက်ဘလက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ Dianbol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ပါ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပါးစပ် Dianabol ကိုပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါက၊ Dianabol (Methandrostenolone) အမှုန့်ကိုအွန်လိုင်းမှရွေးချယ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
 ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်။ ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်ရုံး၊ အမျိုးသား မော်ကွန်းတိုက်နှင့် မှတ်တမ်းဝန်ဆောင်မှု၊ အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုများ စီမံခန့်ခွဲရေး။ 18 ဇန္နဝါရီ 1983။ စစ။ 2208–2209။
 Schänzer W, Geyer H, Donike M (ဧပြီ 1991)။ "လူတွင် metandienone ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်- conjugated excreted urinary metabolites များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ စွန့်ထုတ်မှုနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် bis-hydroxylated ဇီဝဖြစ်စဉ်များ၏ဓာတ်ငွေ့ chromatographic-mass spectrometric ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း" Steroid ဇီဝဓာတုနှင့် မော်လီကျူး ဇီဝဗေဒဂျာနယ်။ ၃၈ (၄): ၄၄၁–၆၄။ doi-38/4-441(64)10.1016-y။ PMID 0960. S0760CID 91။
 Yesalis CE, Anderson WA, Buckley WE, Wright JE (1990)။ " anabolic-androgenic steroids များကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမဟုတ်သောအသုံးပြုမှုဖြစ်ပွားမှု" (PDF)။ NIDA သုတေသန Monograph ။ ၁၀၂:၉၇–၁၁၂။ PMID 102။
 Schänzer W, Geyer H, Fusshöller G, Halatcheva N, Kohler M, Parr MK, Guddat S, Thomas A, Thevis M (2006)။ "လူ့ဆီးတွင် metandienone ၏ရေရှည် metabolite အသစ်၏ဒြပ်ပေါင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်လက္ခဏာရပ်များ" Mass Spectrometry တွင် လျင်မြန်သော ဆက်သွယ်ရေး။ 20 (15): 2252–8။ Bibcode-2006RCMS…20.2252S။ doi:10.1002/rcm.2587။ PMID 16804957။